Ukuthola Umfuyi Onomthwalo Wemfanelo: Izeluleko Ezi-7 Zokuthenga Inja - Okufakiwe
Ukuthenga inja, noma ukuthola inja, kuyisinqumo esikhulu okufanele sisenze, esifana nalezo zinqumo zokuphila esizenzayo njengokukhetha umsebenzi, ukuthi sishade nokuthi siba nezingane.
Uma wenza iphutha ngomsebenzi wakho, kungenzeka ukuthi ushintshe indlela futhi uthole ukushaya okusha. Izingane nezinja? Ukuyo ukuhudula isikhathi eside. Uma usuthenge inja; kwenzelwa ukugcina.
Cabanga ukuthi usukulungele ukuthatha igxathu futhi ulethe ifayili le- umngani onemilenze emine emndenini wakho? Sihlanganise lo mhlahlandlela ophathekayo ukukukhomba endaweni efanele futhi sikusize wenze isinqumo unolwazi.
1. Ingabe Uyilungele Inja?
Isabelomali - Ngoba Izinja Azishibhile
Indlela Yokuphila - Badinga Isikhathi Sakho!
Ikhaya - Likhulu Kangakanani?
2. Ungagijimeli Ukuthola Inja!
3. Thola Umfuyi Ohloniphekile
Buka Abazalanisi BamaYard Emuva (okusho ukuthi amaPuppy Farms)
4. Buza Umfuyi Imibuzo Eminingi
5. Buka iPuppy: Ngaphambi kokuthi Ubalethe Ekhaya
6. Umthetho wamaviki ayisishiyagalombili
7. Hlala Uxhumana
Okokuqala, ngaphambi kokuthi uqale ufune umfuyi noma uzame ukuthenga inja, kufanele ucabangele ukuthi isabelomali sakho, indlela ophila ngayo nokuzibophezela kwakho kwamanje kuyamvumela yini umlingani onemilenze emine.
Ungakwazi yini ukumthenga? Kuya ngohlobo , ungakhokha noma yikuphi phakathi kuka- $ 500 no- $ 2,500 ngomdlwane. Ungakwazi yini ukuthenga ukudla kwakhe kwansuku zonke? Izifundo zakhe zokuqeqesha? Umshuwalense wakhe? I-premium ejwayelekile yanyanga zonke yomshuwalense wezinja ngo-2016 kwakungu- $ 42.45 . Inani lizoya ngokuthi unaluphi uhlobo lwenja onalo, izinhlobo ezincane zivame ukuba namaphrimiyamu aphansi kunezinhlobo ezinkulu.
I-PDSA izindleko ezilinganiselwayo zokuba nenja ziphakathi kuka- $ 21,000 kuya ku- $ 41,000; kuya ngosayizi wazo.
Kodwa ama-premium omshuwalense asasebenza inani elingcono lemali uma uqhathanisa izindleko zokwelashwa ezijwayelekile kodokotela bezilwane.
Iphrimiyamu yanyanga zonke
I-Labrador $ 37.44
Inja Yabelusi BaseJalimane $ 34.32
IGolden Retriever $ 40.56
Inqwaba $ 39.00
I-Beagle $ 34.32
Uma ungatholi umshuwalense, ungakwazi yini ukukhokhela lezi zindleko zokwelashwa uma kwenzeka egula?
Ukutheleleka Endlebeni $ 149.30
Ukungezwani komzimba $ 234.84
Isisu esibuhlungu $ 385.46
Ukutheleleka Kwamehlo $ 115.45
Isifo samathambo $ 255.75
Ngabe inja yakho izosala yodwa isikhathi eside? Ayikho inja okufanele ishiywe yodwa isikhathi eside kunamahora ama-3-4 lapho isikhule ngokugcwele .
Imidlwane ingalwela ukushiywa yodwa isigamu sehora. Ukushiya umdlwane nakho akusizi ngokugqekeza noma ukuhlafuna. Ungamisa kanjani izingozi endlini noma ifenisha ehlafunwayo uma ungekho?
Siyazi ukuthi izinja zingahlupheka nazo ukukhathazeka ngokwehlukana ; bathambekele kakhulu kulokhu uma kukhona inqubo engahambelani ngaphakathi ekhaya futhi uma bengahlangene kahle. Lapho izinja zingakwazi ukubekezelela ukushiywa zodwa, zizohlafuna, zikhonkothe, zichame bese zikhulula. Uma lokhu kungalawulwa, baba nokuziphatha okukhathazayo futhi kungenzeka baphendule kabi ngeziqhumane, ukuduma kwezulu neminye imisindo emikhulu
Ngaleso sizathu, udinga ukuqinisekisa ukuthi unesikhathi sokuchitha nomdlwane wakho lapho umletha ekhaya. Ungazibophezela okungenani ekuqeqeshweni imizuzu engama-20-30 nsuku zonke ?
Umfuyi Oziphendulela uzozibhekela umnikazi amasheke, kepha, kufanele uzihlole kuqala.
Siyazi ukuthi izinja ezihlangana nabantu zisencane mancane amathuba okuthi zibonise isimilo esesabekayo noma esinolaka njengoba zikhula.
Ukuqala ukuqeqeshwa kwabo besebancane kubeka isibonelo. Bayakwazi okulindelwe kubo kusukela osukwini lokuqala; kulula kakhulu ukugcina isimilo kunokufunda kabusha.
Uma usebenza amahora angajwayelekile - ingabe ikhona insizakalo yenkulisa ongayisebenzisa, noma i-walker yezinja? Uma ungenayo imali etholakalayo yalokhu, abangani noma abomndeni bangangena ukuze bahambe naye noma badlale naye egcekeni?
Yini othanda ukuyenza ngesikhathi sakho sokuphumula? Ingabe ungumuntu othanda ukuhamba ngezintaba? Uma kunjalo, inja enemingcele yamandla ethanda ukusebenza njenge UShiloh Shepherd kungaba umdlalo ophelele! Noma ingabe uyinyoni yasekhaya futhi ukhetha ukugoqana kusofa nencwadi? KuChihuahua kungaba khona lapho eduze kwakho. Udinga ukubhekana namaqiniso nokuthi ungakanani isikhathi okufanele usisebenzise nenja yakho bese ufanisa amazinga abo omsebenzi nawezakho.
Ingabe unazo izingane? Abazukulu? Uma kunjalo, uzodinga i-pooch enobungane emndenini ejabule ngokuzipholela eduze kwengane kodwa ijabule ngokulingana ngokudlala ibhola egcekeni njenge Umngcele weCorder Collie Labrador . Izinhlobo ezincane njenge- Morkie ungabhekani kahle nezingane ezigijima ngo-100mph.
Ingabe okokuqala ungumnikazi wenja? Uma kunjalo, udinga ukubheka lezo zinhlobo ezinobungane nezithobekile.
Yiba namaqiniso ngamakhono akho namakhono akho uma kukhulunywa ngokuqeqesha izinja - uma uhlobo lwaziwa ngokuba nzima ukuluqeqesha, mhlawumbe luzokufanela kangcono uma unolwazi oluthile ngaphansi kwebhande lakho?
Izinhlobo ezincane zibhekana ngokugqamile emafulethini noma ezindlini; noma bekhula kancane baba lula ngokwanele ukuthwala phansi nokwehla ngezitebhisi. Ezinhlotsheni ezinkulu, zikhula kahle ezindaweni ezinkulu ezinamagceke azo okuzodlalelwa kuwo. Lindela ukweqa uFido lapho upheka isidlo sakusihlwa; ikhishi elikhudlwana lenza lokhu kube lula kakhulu. Futhi, uma uqasha, hlola ukuthi umninikhaya wakho uyazamukela yini izilwane ezifuywayo! Abaningi abakwenzi lokho.
Ucwaningo inja izala . Khuluma nabanye abanikazi bezinja. Thola okuhle, okubi nokubi! Imininingwane engaphezulu onayo iba ngcono.
Ngakho-ke uthathe isinqumo sokuthi usukulungele. Unesikhathi esitholakalayo futhi ungazibophezela ngokwezezimali noma yikuphi phakathi kweminyaka eyi-12 kuya kwengu-18. Lokho kungaphezu kwezinsuku ezingama-6,000, ngayinye yazo inja yakho ezodinga uthando, ukunakwa nesikhathi.
Abazalisi abaziwayo bazoba noMama wemidlwane atholakale ukuze abukwe - imvamisa noBaba! Uma uBaba engekho endaweni efanayo, umfuyi onomthwalo wemfanelo ngeke abe nezinkinga ekuxhumaneni neStud ukuze atholakale ukuze abukwe.
Abafuyi abanomthwalo wemfanelo bazalela ukuqinisekisa impilo yezinja zabo.
Zizozalela kuphela kulezo zinja ezibonisa izimfanelo ezifiselekayo nobumnene balolo hlobo oluthile.
Imvamisa ziba nodoti abambalwa ngonyaka futhi zizojwayela ukugxila kohlobo olulodwa - noma ezimbili uma zihlobene kakhulu ngosayizi, ubumnene nokubukeka.
I-American Kennel Club inayo imakethe yayo uqobo; futhi banokubhaliswa kwelayisensi yeBreeder.
Okuhle ngemakethe ye-AKC ukuthi imvamisa inikeza ulwazi oluningi ngomfuyi.
Lokhu kukunika indawo enhle yokuqala lapho uzibuza ukuthi yini okufanele uyibheke kumfuyi. Cabanga ngalokhu okulandelayo:
Sinesikhathi esingakanani zizala izinja?
Bangaki udoti abanawo ngonyaka?
Zingaki izinhlobo zezinja abazikhangisayo?
Ingabe bayaqhudelana emidlalweni noma emidlalweni?
Ithini impendulo yabo? Ingabe banayo indawo yokuxhumana nabantu? Sesha amagama abo kwinjini yokusesha ye-inthanethi bese ubona ukuthi yini evelayo.
Lapha, i-sire nedamu akuvamile ukutholakala ukubuka. Bangase bathi imidlwane ibhalisiwe i-AKC nokuthi bazokudlulisela amaphepha, kepha empeleni lokhu akwenzeki .
Akuvamile ukuba khona kwezokuxhumana - akekho obonakala azi lutho ngabo.
Abafuyi abaningi abasemuva basebenza ezimotweni noma kumaveni - uma othile ephakamisa ukuhlangana endaweni yokupaka ukubuka noma ukuqoqa umdlwane, balekela amagquma.
Noma kulinga ukuthatha umdlwane kumfuyi wegceke ongemuva, ukuze nje ubakhiphe kuleso simo, iqiniso elidabukisayo ukuthi omunye umdlwane uzovele athathe indawo yawo. Ukuzalanisa amagceke emuva kuzoma kuphela uma kungasekho ukufuneka , yingakho ukuthola umfuyi onedumela kubaluleke kangaka.
Enye yezinzuzo zomhlaba wethu wezobuchwepheshe ukuthi ingakanani imininingwane etholakala ezinkundleni zokuxhumana. Joyina amaqembu aqondene nokuzala. Cela izincomo zomfuyi, noma uma ucwaninga eyodwa ikakhulukazi, buza ngazo emaqenjini.
Abafuyi abadumile bazokwenza ukuhlolwa kwezempilo esitokweni sabo sokuzalela. Bazoqinisekisa ukuthi izivivinyo ezidingekayo eziqondene nohlobo zicacile ngaphambi kokuzalela noma iyiphi inja.
Lindela ukufakwa ohlwini lokulinda. Uma abalimi bethola udoti owodwa ngonyaka, mincane kakhulu imidlwane yokuhambahamba. Ungadangali ukulinda - umdlwane onempilo futhi ozwakalayo kufanelekile?
Kunemibuzo eminingi emihle okufanele uyibuze umfuyi:
Bazihlanganise Kanjani Nezidlwane?
Yini iPuppy Njengamanje Edliswa?
Yimiphi Imigomo Umntwana Onayo?
Ngingakwazi Ukuhlangabezana Nabazali Bomdlwane (okusho uSire noDamu)?
Kufanele futhi ulindele ukuthi bakubuze imibuzo eminingi njengoba ubabuza.
Abafuyi abaningi abahloniphekile bazofuna ukuqinisekisa ukuthi injana yabo iya ekhaya laphakade futhi ungakunika lokho ekudingayo.
Kufanele ucelwe ukuthi usayine inkontileka. Lokhu kuvame ukubeka ukuthi uma kungasizathu esithile ungasakwazi ukunakekela umdlwane / inja, kufanele uxhumane nomfuyi. Imvamisa bazonikela ngawe ukuthi ubuyisele umdlwane / inja kubo noma bazokusiza ekutholeni ikhaya elisha.
Bacele ukuhlolwa kwabo kwezempilo, bona ubufakazi bozalo. Babuze nganoma buphi ubufakazi bokuthi kunemiphi imibukiso abayiwinile noma abancintisene nayo. Futhi, ulwazi oluthe xaxa ungaluthola lungcono.
Abafuyi abaningi abahloniphekile bazovumela abanikazi abangahle babuke umdlwane wabo phakathi kwamasonto ama-4-6.
Imvamisa ungakhetha injanyana ongathanda nayo kulesi sigaba. Lokhu kukuvumela ukuthi ubone ukuthi umama uxhumana kanjani namazinyane akhe nokuthi aphendula kanjani kuye.
Ungabuza umfuyi ukuthi bazihlanganise kanjani lezi zinjana nokuthi zikhula kanjani.
Kungenzeka ubone nakule minyaka ukuthi kanjani imidlwane ezethembayo kukhona - lokhu kungasiza ekunqumeni ukuthi iyiphi imidlwane ezokufanela nempilo yakho engcono kakhulu.
Imidlwane akufanele ithathwe kuMama ize ibe okungenani namasonto ayisishiyagalombili ubudala.
Imidlwane ehlukaniswe maduze kakhulu nomlingani wayo odoti noMama wayo iyehluleka ukuthola amakhono athile omphakathi , njengokuvimbela ukuluma, ukudlala ukudlala nokubopha.
Kubalulekile ukuthi imidlwane ingathathwa kudoti wayo ngaphambi kwamasonto ayisishiyagalombili ubudala .
Noma yibaphi abalimi abaphakamisa ngenye indlela abakuqondi ukukhula komdlwane futhi kufanele kugwenywe njengesifo.
Abafuyi abaziwayo bazojabula ngawe ukuxhumana nabo noma usuqoqe umdlwane wakho. Bazokuphendula ngenjabulo noma imiphi imibuzo onayo. Imvamisa bazobheka imindeni ukuqinisekisa impilo yemidlwane yabo.
Abalimi abaningi abanomthwalo wemfanelo nabo bazonikeza ngesiqinisekiso .
Yize kungeyona into othanda ukuyicabanga ephathelene nesilwane esiphilayo, sikunikeza ingqondo.
Abalimi bazethemba ngokwanele empilweni yesitoko sabo.
Ukunxusa lesi siqinisekiso imvamisa kufanele uye ekuhlolweni kwezilwane kungakapheli izinsuku eziningi ulethe umdlwane wakho ekhaya. Kukhona futhi nemikhawulo yokuzivocavoca phakathi nonyaka wokuqala - azikho izitebhisi zokukhuphuka, akukho ukuzivocavoca ngokweqile, ukweqa okulinganiselwe njll. Lokhu okungenani kuze kube yilapho amapuleti okukhula komdlwane ehlangana.
Abafuyi bazokweluleka nangemihlahlandlela yokondla njengoba sazi izinto ezintathu ezinomthelela ku ukukhula kwamathambo ezinjeni ; ufuzo, imvelo kanye nokudla okunempilo.
Lezi zimiso zizoqinisekisa ukuthi unika umdlwane wakho ithuba elingcono kakhulu lokukhula libe yindlwane yezempilo nenjabulo.
Iningi labalimi bezinja lingaqala futhi uhlelo lokugomela imidlwane futhi lizojabula kakhulu ukukukwazisa ngomzila / isheduli engcono kakhulu ongayilandela.
Izeluleko zethu eziyisikhombisa eziphezulu zizokusiza ekutholeni umlingani wakho onemilenze emine nomfuyi onedumela elihle.
Okubalulekile ukwenza ucwaningo lwakho, uthole uhlobo olufanelana nendlela ophila ngayo futhi ube namaqiniso ngamakhono nobuchule bakho njengomphathi wezinja.
Uma usuqinisekile ngalokhu, thola umdlwane onempilo okhuliswe ngumfuyi onomthwalo wemfanelo.
Ngabe usanda kuthenga inja? Isiphi iseluleko osisebenzisile? Zizwe ukhululekile ukusishiyela inothi esigabeni sokuphawula ngezansi.
Shih Tzu Chihuahua Mix: 5 Kumelwe Ufunde Amaqiniso
Konke Odinga Ukukwazi Nge-Pocket Beagle
isisindo esimaphakathi senja yase-bernese yasezintabeni
ukuzingela amagama ezinja zamalebhu amnyama
i-english english cream retriever emhlophe
izinhlobo zemibala emihle kakhulu
injana yami kufanele ilale kangakanani